'iPhone Isina Kutsigirwa' Meseji: Zvazvinoreva uye Maitiro Ekubvisa Izvo! - Iphone
maitiro ekuvhura mubatanidzwa muMiami
kumuka na4am zvichireva
Nei iphone yangu ichingozununguka
Pane ziviso pane yako iPhone inoti haina kutsigirwa uye iwe unoda kuti iende. Zuva rega rega, yako iPhone inoyeuchidzwa iwe kutsigira yako iPhone! Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura zvinoreva 'meseji isina kutsigirwa kumusoro' meseji uye kukuratidza maitiro ekuibvisa .
iphone 6 hapana basa t nhare
Zvinorevei kuti 'iPhone Isina Kutsigirwa kumusoro' Zvinorevei?
Iyo 'iPhone Isina Kutsigirwa Up' meseji inoreva kuti yako iPhone haina kutsigirwa kuICloud kwenguva yakareba yenguva. iCloud backups zvakagadzirirwa kuitika chero nguva yako iPhone yakabatana kune simba, yakavharwa, uye yakabatana neWi-Fi.
Ichi chiziviso chinoramba chichibuda pane yako iPhone haisi kutsigira. Izvi zvinowanzoitika kana iwe ukapererwa neICloud nzvimbo yekuchengetera. Pazasi ini ndichatsanangura maitiro ekubvisa iyo 'iPhone Isina Kutsigirwa Up' meseji uye maitiro ekuchengetedza yako iPhone uchishandisa iCloud uye iTunes.
Maitiro Ekubvisa Iyo 'iPhone Isina Kutsigirwa kumusoro' Meseji
Pane nzira shoma dzekubvisa iyo 'iPhone Isisina Kutsigirwa Up' meseji pane yako iPhone. Chokutanga, unogona negadziriro yeparutivi iPhone wako iCloud. Tine yakanakisa YouTube vhidhiyo inotsanangura maitiro ekuchengetedza yako iPhone kuICloud. Kana iwe ukamhanyira muzvinhu munzira, tarisa chinyorwa chedu kana yako iPhone haisi kutsigira kumusoro kuna iCloud .
iphone 6 isiri kuchaja zvakanaka
Kana iwe usiri kuda kutsigira yako iPhone uye iwe uchida kuti ichi chiziviso chiende zvachose, vhura Zvirongwa uye tinya pazita rako kumusoro kwechiso. Wobva wadzvanya iCloud -> iCloud negadziriro yeparutivi uye dzima switch iripedyo ne iCloud negadziriro yeparutivi . Pakupedzisira, tapira Zvakanaka apo yambiro yekusimbisa inowanikwa pachiratidziro.
Paunodzima iCloud Backup, yako iPhone inozozvitsigira yega pachayo kana iwe ukaibaya mu komputa yako uye vhura iTunes. Kana usati, ndinokurudzira zvakasimba kutsigira iko zvino . Iwe haudi kuve muchinzvimbo chekurasikirwa nedata rako rese muchiitiko chesaona isingatarisirwi.
Hapasisinazve Backup Meseji!
Iwe wakabudirira kubvisa iyo pesky 'iPhone Isina Kutsigirwa Up' meseji uye netariro kutsigira yako iPhone zvakare. Ndinovimba iwe uchagovana chinyorwa ichi pasocial media kubatsira shamwari dzako nemhuri kubvisa ichi chiziviso futi! Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo nezve yako iPhone, tisiye isu mhinduro pasi pazasi!
nei wachi yangu yeapuro yakanamatira paapuro logo